Home » Vaovao momba ny indostrian'ny cruise » CruiseTrends: Ireo sambo fitsangantsanganana miaraka, miorina amin'ny cabins marobe no angatahina
Tatitra CruiseTrends ho an'ny volana martsa 2021 navoaka androany
Ny tatitra dia manome fampahalalana momba ny fironana fitsangantsanganana malaza indrindra eo amin'ny mpanjifa, ao anatin'izany ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo, andalana ary daty fitsangatsanganana ho an'ny premium, rendrarendra ary ny fitsangantsanganana amoron-drano.
Ny angon-drakitry ny tatitra dia mampiseho fa miara-mandeha ny sambo mpitsangatsangana, miorina amin'ny tranona fitaterana sambo fitsangantsanganana maromaro
Navoaka androany ny tatitra CruiseTrends ho an'ny volana martsa 2021. Ity tatitra ity dia manome tsipiriany momba ny fironana amin'ny fitondrantenan'ny mpanjifa amin'ny dian'ny sambo fitsangantsanganana amin'ny volana martsa 2021.
Ny tatitra CruiseTrends an'ny martsa 2021 dia voalaza etsy ambany.
1. Premium / Contemporary: Royal Caribbean
Amin'ny laharana faharoa dia ny olo-malaza ho an'ny premium / ankehitriny, Regent Seven Seas ho an'ny rendrarendra ary American Queen Steamboat Co. ho an'ny ony.
2. Haitra: Oceania Riviera
3. Renirano: Duchess Amerikanina Mpanjakavavy Steamboat Co.
Manaraka manaraka izao dia ny Celebrity Equinox ho an'ny premium / contemporary, Oceania Marina ho an'ny rendrarendra ary ny mpanjakavavin'ny American Cruise Lines 'an'ny Mississippi ho an'ny renirano
3. Renirano: Amerika Avaratra
Manaraka malaza izao dia i Amerika Avaratra ho an'ny premium / contemporary, Mediteraneana ho an'ny haitraitra ary Eropa ho an'ny renirano.
Manaraka eo amin'ny lazany dia Miami ho an'ny premium / contemporary, New York ho an'ny rendrarendra ary Budapest ho an'ny renirano.
2. Haitra: Marseille
3. Renirano: Passau
Manaraka eo amin'ny lazany dia i Nassau ho an'ny premium / contemporary; Monte Carlo ho an'ny rendrarendra ary Wina ho an'ny renirano.
2. Haitra: Espana
3. Renirano: Etazonia
Ny faharoa dia ny USA ho an'ny premium / contemporary, Greece ho an'ny rendrarendra ary Alemana ho an'ny renirano.
(Miorina amin'ny totalin'ny fangatahana quote isaky ny karazana kabine)
Ny faharoa dia ny kabine 2 ho an'ny premium / contemporary, 3 cabins ho an'ny rendrarendra ary 2 ny cabins ho an'ny renirano.
2. Haitra: 10 alina
Faharoa dia 14 alina ho an'ny premium / ankehitriny, 7 alina ho an'ny rendrarendra ary 8 alina ho an'ny renirano.
1. Premium / Contemporary: Novambra 2021
2. Haitra: Janoary 2022
1. Contemporary / Premium - namandrika 381 andro mialoha
2. Luxury - namandrika 422 andro mialoha
3. Renirano - namandrika 467 andro mialoha